ဒီနေ့မှာ အသက် (၅၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူ - Cele Gabar
ဒီနေ့မှာ အသက် (၅၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူ
By ChilliPosted on May 19, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ လေးဖြူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်ကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ IC အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီအယ်ဘမ်တွေထွက်ရှိထားတဲ့ အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိထားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ မေလ (၁၉)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် လေးဖြူရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မေလ (၁၉)ရက်နေ့လေးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် လေးဖြူက အသက်(၅၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
Happy Birthday ပါ ကိုလေးရေ…. ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒများအားလုံး ပြည့်စုံပါစေလို့ CeleGabar ကနေမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ကိုလေးဖြူရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Source – Chit San Maung
ဒီေန႔မွာ အသက္ (၅၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္အဆိုေတာ္ႀကီး ေလးျဖဴ
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေလးျဖဴကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ IC အဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို တစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးစီးရီအယ္ဘမ္ေတြထြက္ရွိထားတဲ့ အထိကိုေအာင္ျမင္မႈေတြလည္းရရွိထားခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီေန႔ ေမလ (၁၉)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ ေလးျဖဴရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေမလ (၁၉)ရက္ေန႔ေလးမွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေလးျဖဴက အသက္(၅၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
Happy Birthday ပါ ကိုေလးေရ…. ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး လိုရာဆႏၵမ်ားအားလုံး ျပည့္စုံပါေစလို႔ CeleGabar ကေနေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးေတြလည္း ကိုေလးျဖဴရဲ႕ ေမြးေန႕အတြက္ ေမြးေန႕ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ညီမဖြစ်သူ သဉ္ဇာရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
Next post မင်းသမီး Kim Sae Ron ဟာအရက်သောက်ပြီးကားတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားဝင်တောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ခဲ့